Ururka Waxbarashadda Qaranka ee Vermont Xog ururinta ku saabsan Xidhida Dugsiga ee Waalidka/Daryeelaha
Gacaliyayaal Waalidiinta iyo Daryeelayaasha
Xog ururintan 11 su’aalad ah waxay ka timida Ururka Waxbarashadda Qaranka ee Vermont. Waa in laga caawiyo macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiga inay si ka wanaagsan u taageeraan adiga iyo carruurtaada muddada Covid-19 gurmadka caafimaadka. Waxaan garanaynaa inay kuwan adiga kugu yihiin wakhtiyo adag oo aan la hubin – kormeerida waxbarashadda fogaanta ah, iyo inaad nolosha isku habbayso – iyo carruurtaada, kuwaas oo ka go’ay saaxiibadood, dugsiga, iyo habkoodii caadiga ahaa ee nolosha.
Macluumaadku waxa uu ka caawin doonaa macalimiintaada inay horumariyaan waxbarashadda fogaanta ah isticmaalkeeda, inay dejiyaan filashooyinka dugsiga macquulka ah ee adiga iyo carruurtaada, in la aqoonsado caqabadaha fayo qabka qoyska, oo la yareeyo walbahaarka. Waxay sidoo kale naga caawin doontaa inaan ku shaqayno sharci dejinta, guddoomiyaha gobolka iyo kuwa kale si looga ilaaliyo adiga iyo qoyskaaga khasaaraha maaliyada, caafimaadka iyo dhaqaalja safmarkan uu ku sababay wax badan.
Si loo ilaaliyo gaar ahaansha dadka, MA waydiinayno magacyo ama cinwaanada guriga, keliyada degmada aad ku nooshahay.
Rabitaankayaga ugu wayn waa adigu inaad badbaado ahaato, fayo qabto, oo amni ahaato. Fadlan ogow in Vermont-NEA’s 13,000 macalimiinta dugsiga dad waynaha, kaaliyayaasha maamulka, kaaliyayaasha barayaasha, darawalada baska, ilaaliyayaasha iyo shaqaalaha dayactirka inay kuu taageeri doonaa adiga qaab kasta oo ay karaan,
Kii daacad kuu ahaa,
Don Tinney, Guddoomiyahat, Vermont-NEA
1. Imisa carruur ah oo ka tirsan qoyskaaga ayaa ka qayb qaato waxbarashadda fogaanta ah hadda?
Hal Labba Saddex In ka badan saddex
2. Degmaddee ka mid ah Vermont ayaad ku nooshahay?
3. Maxaad isku tihiin qaraabo ahaan ardayga(da) dhalinta yar?
Hooyo ama Hooyo Aayo ah Aabo ama Aabo Adeer ah Masuulka ama Waalidka Korinta Awowga iyoa yayda Qaraabo kale (tusaale, walaalka wayn, Edo, Adeer, Ilmaadeer, iwm.)
Kale (fadlan caddee)
4. Noocyadee qalabyo ah ayaa loo heli karaa ardayda(da)?
Kombuyuutarka Chromebook Taablet ama iPad Telefoonka casriga ah Qalab uma hayno ardayda(da).
5. Maku haysataa internat la isku halayn karo gudaha gurigaaga si aad u taageerto waxbarashadda fogaanta ah?
6. Sideed uga jawaabaysaa warbixintan: “Waxbarashadda fogaanta ah ee qoyskayga waxay u socotaa si wanaagsan.”
Si xoogan U aqbalsan Aqbalay Dhexdhexaad/Fikrad kama haysto Si xoogan U khilaafsan Diidan
7. Waa maxay walaacyadaada ugu wayn aama caqabadaha waalid ahaan ama daryeelo ee aadka qabto waxbarashadda fogaanta ama aan gudaha dugsiga ahayn? (Sax dhammaan inta ku habboon,)
Inta ay leegtahay shaqada dugsigu Tirada saacadaha aan ku hawlanahay sii wadista waxbarashadda carruurtaydu inay dhabada saxda ah ahaato. Wakhtiga ilmaha(carruurta) ay ku qaadanayaan kombuyuutarka hortiisa ama qalab kale. Xumaynta waajibka dugsiga marka aan qabanayo shaqadayda guriga. Daryeelida ilma(carruur) aad u y ar marka aan caawinaayo ilmaha(carruurta) da’da dugsiga gaadhay. Internatka oo aad u liita ama aan la isku lahayn karin. La socodka tirada wada xidhiidhka dugsiga. Tirada macalimiinta ama shaqaalaha kale ee dugsiga aan ku xidhayo midba midka kale ama todobaadka. Isku xidhka iyo helida adeegyada waxbarashadda gaarka ah. Fahanka sida ilmaha(carruurtu) shaqadooda dugsiga buundo loo siinayo ama loo qiimaynayo., Saamaynta kala fogaanshaha ama go’doominta bulshadda ee ilmahayga(carruurta) kartida ay wax ku bartaan ama ku faraxsanaadaan.
Walaacyada kale ama caqabadaha (fadlan caddee)
8. Iyaddoo ku salaysan baadhitaankaaga, kee soo socda ayaa si wanaagsan u faahfaahiya sida ilmahaaga(carruurtu) ay uga jawaab celinayaan waxbarashadda fogaanta ah? (Dooro inta ku habboon.)
Xamaasadaysan Wareersan Walbahaarsan Rajo wayn qaba Murugaysan. La baadhay
9. Dhibaatooyinka dhaqaale ama maaliyadeed ayaad la kulantay iyaddoo sababto tahay Covid-19?
Bixinta kirada ama lacagta daynsiga guriga Bixinta caymiska caafimaadka Bixinta biilasha caafimaadka jeebka ka baxsan Bixinta biilashadayda adeegyada guriga (biyaha, gaasta iyo korontada, internatka/telefeeshanka,iwm) Awooda cuntada qoyskayga Awooda shidaalka baabuurkayga ama baabuurka wayn. Ku nool dakhli yar ka dib shaqo dhimidii ama yaraynta saacdaha shaqada. Bixiya daryeelka carruurta Ima haysato wax dhibaatooyin dhaqaale ama maaliyadeed hadda.
10. Maxay dugsiyada dad waynah hadda sameeyaan si ay ugu dhigaan waxbarashadda fogaanta ah mid guulaysata, la xiisan karo, iyo mid wax soo saar u leh carruurtaada iyo qoyskaaga?
Ma hayo wax talo soo jeedin ah wakhtigan. Talo soojeedintayda lagu horumarinayo waxbarashadda fogaanta ah.
11. Ma jeclaan lahayd inaad iskaashi la samayso Vermont-NEA iyo macalimiinta deegaanka mustaqbalka si loo dhiso taageerada dugsiyada dad waynaha Vermonta iyo in la hubsado ilma kasta inuu si loo siman yahay u heli karo waxbarashadda tayada saraysa, ee dad waynaha? *
Haa Maya Waxaan jeclaan lahaa inaan barto wax badan oo tan ku saabsan.
Haddii aad ku jawaabtay “haa” ama “waxaan jeclaan lahaa inaad wax badan ogaado,” fadlan magacaaga nagu sii, cinwaanka iimaulka iyo lambarka telefoonka xaga hoose. LAMA wadaagi doonaano macluumaadkan xidhiidhka cid ka baxsan Vermont-NEA.
Waad ku mahadsan tahay dhammaystirka xog ururintan. Oo badbaado iyo caafimaad qab ahow.
GUDBI XOG QAADISYA